किन भाँडियो राप्रपा एकता ? (भिडियो रिपोर्ट) – Himalaya TV
Home » राजनीति » किन भाँडियो राप्रपा एकता ? (भिडियो रिपोर्ट)
किन भाँडियो राप्रपा एकता ? (भिडियो रिपोर्ट)
२८ कार्तिक २०७५, बुधबार १३:१७
सृजना घिमिरे/२८ कार्तिक ।
विभिन्नमा खेमामा विभाजित पूर्वपञ्चहरू यतिबेला एक हुने प्रयास गरिरहेका छन् । पछिल्ला केही दिनदेखि कमल थापा नेतृत्वकाे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, पशुपति शमशेर राणा नेतृत्वकाे राप्रपा प्रजातान्त्रिक र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लाेहनी नेतृत्वकाे एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादीबीच एकता वार्ता भइरहेकाे छ । तर स‌ंवैधानिक राजसंस्था र चुनाव चिन्हको विषयमा स्पष्ट सहमति हुन नसक्दा तीन राप्रपाबीचकाे एकता फेरि पनि अन्याैल बनेकाे छ ।
कार्तिक २६ अर्थात हिजाे राष्ट्रिय सभागृह बुकनै गरेर राप्रपा एकताकाे घाेषणा गर्ने तयारी थियाे । सबै कुरामा सहमति भइसकेकाे र पार्टी एकता अन्तिम चरणमा पुगेको भनिरहेकै बेला एकाएक एकता प्रयास स्थगित हुँदा यतिबेला तीन वटै राप्रपा अान्तरिक छलफल र वार्तामा व्यस्त बनेकाे छ । स‌ंवैधानिक राजसंस्था,चुनाव चिन्ह र नेताहरूको व्यवस्थापनमा कुरा नमिलेपछि एकता प्रयास तत्कालका लागि स्थगित भएको टिप्पणी गरिएको छ ।
त्यसाे त टुट्दै फुट्दै गरेका यी राप्रपा एक हुनलाई धेरै नै जाेड ताेडले लागिरहेकाे पनि धेरै भयाे । दर्जनाैं पटककाे वार्ता र छलफलपछि अब कहिलै नफुट्ने भन्दै पार्टी एकताकाे संघारमा पुगेका यी पार्टीबीचकाे एकतामा फेरि पनि ब्रेक लागेकाे छ । सिद्धान्त र नेतृत्वमा कुनै विवाद नरहेपनि गृहकार्य नपुगेकाे र अाफूहरूबीचकाे एकता सहमति लिपिबद्द हुन नसकेकै कारण एकता केही दिन पर सरेको एकीकृत राप्रपाका अध्यक्ष लाेहनीकाे भनाइ छ ।
अध्यक्ष लाेहनी भन्छन्, “सबै सहमति लिपिबद्ध गरेर जानुपर्छ, नभए फेरि फुट्न सक्छ । विगतका घट्नाले पनि यही भन्छ । हामी समाहित भएका हाै एकले अर्कालाई निलेकाे हाेइन । त्यही भएर नाम एउटाकाे चिन्ह अर्काेकाे राख्नुपर्छ ।”
चुनाव चिन्ह हलाे नै हुनुपर्ने अडान राख्दै अाएका राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष राणा पनि गृहकार्यका लागि थप समय अावश्य रहेकै कारण एकता पर धकेलिएकाे बताउँछन् । सबै कुरा एकै जनाकाे हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन भन्दै उनी भन्छन्, “सबै कुरा एकै जनाकाे हुन सक्दैन । नाम पनि मेराे चिन्ह पनि मेराे भनेकेा वार्ता गर्न नमानेकाे हाे । सबै लचिलाे हुनुपर्छ । यी सबै कुराले फरक पर्या जस्ताे मलाई लाग्दैन । समय दिने कुराले स्थगित भएकाे हाे ।”
यता थापा नेतृत्वकाे राप्रपा पनि एकताका लागि व्यग्र छ । उनीहरूकै भाषामा भनिए जस्तै केही बटमलाइन भने राखिएकाे छ । अध्यक्ष थापा स्वयमले पनि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा बारम्बार यही कुरा दाेहाेर्‍याउँदै अाएका छन्। चुनाव चिन्हकाे विषय महाधिवेशनले निर्णय गर्न सक्ने विषय भएकाले पार्टी मजबुद बनाउने विषयलाई नै तत्काल सबैले महत्व दिनुपर्ने राप्रपाका पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका नेता राजेन्द्र लिङ्देन बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “चुनाव चिन्हकाे कुरा त महाधिवेशनले निर्णय गरेर परिवर्तन पनि गर्न सक्छ । अहिले एक हुने भए पार्टीलाई मजबुद बनाउने हिन्दुत्वलाई मजबुद बनाउने विषयलाई महत्व दिनुपर्छ ।”
निर्वाचनकै मुखमा फुटेर तीन टुक्रा भएका राप्रपा अहिले फेरि एकताको प्रयासमा छन् । र, पार्टीलाई तेस्रो शक्ति बनाउने प्रण गरिरहेका छन् । राप्रपा एकताले यतिबेला कार्यकर्ता पनि उत्साही छन् । याे वा त्याे बहानामा पार्टीकै साख घटाउने गरी अब पनि फुटकाे अवस्था नबनाउन नेतृत्वलाई उनीहरू सुझाव दिन्छन् ।
कताको प्रयास अघि बढाएको राप्रपाको इतिहास छेपाराको कथा जस्तै टुटफुटले भरिपूर्ण छ । व्यक्तित्वको टकराव, चुनाव चिह्नलगायतका कारणले फुटिरहने राप्रपा एक भएर रहन धेरै समय सकेको छैन । अब भने आफूलाई ‘राष्ट्रवादी शक्ति’का रुपमा चिनाउन रुचाउने यी तीनवटै राप्रपाले कार्यकर्ता र समर्थकको मन जित्न पनि मिल्नुको विकल्प छैन ।